26 / 04 / 2021 26 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 624 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, bugs Bunny, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Daffy ဘဲ, Lego, Lego Vidiyo, LEGO.com, အမ်ဗင်artIan, သေးသေးလေး, ဝက်ဝက်, စျေးဝယ်, ကြောင် Sylvester, အဆိုပါ LEGO Group, Tweety, Vidiyo, အီးဝံပုလှေ Wile
Bugs Bunny၊ Daffy Duck နှင့် Marvin the Martian ၏သန့်ရှင်းရာထူးအကြားယခုဖြစ်ကြသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား in 71030 Looney တီးလုံးရုံမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့သော LEGO.com.
နောက်ဆုံးပေါ်မျက်မမြင်အိတ်စီးရီး စျေးနှုန်းကိုစောင့်ရှောက် တစ် ဦး ဂုဏ်သရေရှိ£ 3.49 / $ 4.99 / €ဇာတ်ကောင်နှုန်း 4.99 မှာလိမ္မာပါးနပ်တစ် ဦး swerving မှာ အာရုံကြော - မျှော်လင့်ခုန် £ 4.99 / $ 5.99 / € 5.99 အထိ။ ယူကေမှာတော့ဒီအသေးစားပုံနှုန်းထက်စျေးသက်သာတယ် Lego VIDIYO'' s ကို ၄၃၁၀၈ Bandmates (ပြန်လည်သုံးသပ်), အတိုးပွား - အဖြစ်မှန်ဆောင်ပုဒ်ရဲ့ညံ့ဖျင်းစျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာအပေါ်နောက်ထပ်ဒုက္ခပုံဖော်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းသည်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ 71030 Looney တီးလုံး နှင့်အတူရှယ်ယာ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ရှေးဉီးပွုလုပျသူ အသက် 71029 စီးရီး 21သို့သော်။ ဇန်နဝါရီလကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း Porky Pig၊ The Tasmanian Devil, Sylvester the Cat နှင့် Tweety အပါအ ၀ င်စုစုပေါင်းစာလုံး ၁၂ လုံးစုဆောင်းထားရန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှအသေးစားဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည် ပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ် of 71030 Looney တီးလုံးWile E. Coyote ၏ထပ်ဖြည့်မှုကိုလည်းထင်ဟပ်စေရန် update လုပ်ထားသည် အစပိုင်းတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် box ထဲက။ မင်းလည်းအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ မင်းဒီမှာလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ အခြေအနေကဖြေရှင်းပေးရန်ရန်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် Lego ယနေ့စတင်မိတ်ဆက် - နှင့်မျှတအနည်းငယ်ရှိပါတယ် - ဒီမှာသွား.
← တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: Plum Blossom ၏ Bonsai
Lego Minions: Gru ၏ထ BrickHeadz တရားဝင်ထုတ်ဖော်, ယခုရရှိနိုင် →